Cartier Women’s Initiative | Calling Women Entrepreneurs, Innovators and Social Change Makers! – Impact Hub Yangon
Cartier Women’s Initiative မှ ၂၀၂၃ ခုနစ်အတွက် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အမျိုးသမီး စွန့်ဦးတီထွင်သူများ၊ ဆန်းသစ်ဖန်တီးသူများနှင့် လူမှုရေးရာ ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်သူများအား ခေါ်ယူလျက်ရှိပါတယ်
Cartier Women’s Initiative ဆိုတာဘာလဲ?
Cartier Women’s Initiative သည် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်ခြင်းနဲ့ ပက်သက်တဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးဦးဆောင်တဲ့ လုပ်ငန်းများနဲ့ အမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းများကို ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ လူမှုရေးနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဖန်တီးစေနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနစ်မှစတင်ကာ Cartier Women’s Initiative သည် အမျိုးသမီးစွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကို ငွေကြေးအထောက်အပံ့များပေးခြင်း၊ လူမှုရေးနှင့် လူသားအရင်းအမြစ်ထောက်ပံ့မှုများပေးခြင်းဖြင့် ၄င်းတို့ရဲ့ စီးပွားရေးကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး ခေါင်းဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်များကို တည်ဆောက်ပေးရန်ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Cartier Women’s Initiative မှ ၂၀၂၃ ခုနစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ လူမှုအကျိုးပြု အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်များကိုလည်း ခေါ်ယူလျက်ရှိပါတယ်။
သင်ဟာ လူမှုအကျိုးပြု စတင်ခါစ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို စီမံနေတဲ့ အမျိုးသမီးစွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါက လျှောက်ထားရန် တိုက်တွန်းပါတယ်။
အစီအစဉ်ကို ပါဝင်လျှောက်ထားပြီး စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ စုဝေးတည်ရှိရာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကို ဝင်ရောက်ချိတ်ဆက်ပြီး စနစ်တကျလမ်းညွှန်အကြံပေးခြင်းများ၊ မီဒီယာများမှာ ထင်ပေါ်စေခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွက် ငွေကြေးအထောက်အပံ့များ ကိုရယူလိုက်ပါနော်။
လျှောက်လွှာပိတ်ရက်မှာ ဇွန်လ (၃၀) ရက်၊ ၂၀၂၂၊ နေ့လည် (၂) နာရီ CEST အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
Cartier Women’s Initiative ၏ မိတ်ဖက်တစ်ယောက်အနေဖြင့် Impact Hub Yangon မှ အစီအစဉ်၏သတ်မှတ်ချက်များနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းနှင့် လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ ပက်သက်ပြီး အကူအညီများလည်း ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အစီအစဉ်ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်များနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိပြီးလျှောက်ထားရန် စိတ်ပါဝင်စားပါက Impact Hub Yangon အား ဖုန်း (၀၉ ၉၅၁၈၅၁၂၉၈၊ ၀၉ ၉၇၃၄၇၄၁၄၁) သို့မဟုတ် အီိးမေးလ် yangon@impacthub.net မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြီး လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ ပက်သက်ပြီး အကူအညီရယူနိုင်ပါတယ်။
Cartier Women’s Initiative is now calling women impact entrepreneurs, innovators and social change makers for 2023.
What is Cartier Women’s Initiative?
The Cartier Women’s Initiative is an annual international entrepreneurship program that is open to women-run and women-owned businesses from any country and sector that aim to haveasustainable social and/or environmental impact. Since 2006, Cartier Women’s Initiative seeks to drive change by empowering women impact entrepreneurs, providing them with financial, social and human capital support to grow their business and build their leadership skills.
Applications for 2023 are also opened for impact women entrepreneurs in Myanmar this year.
If you areawoman entrepreneur running early stage and for profit business that contribute the positive impacts to the community, we encourage you to apply the program.
Beapart ofavibrant global community of entrepreneurs and experts, and get benefit from tailored mentoring and coaching, media visibility and financial support.
Apply now: https://www.cartierwomensinitiative.com/awards
The deadline of the application is June (30) , 2pm CEST, 2022.
Asascouting partner of Cartier Women’s Initiative, Impact Hub Yangon will provide support on assessing the criteria and application process.
If you fit with the criteria and would like to apply, please contact Impact Hub Yangon via Phone: 09 951851298, 09 973474141 or email: yangon@impacthub.net to get support on the application process.
Previous The Applications are being reviewed by the Selection Committee!
Next Calling Ginger Farmers, Ginger Products Producers and Food Producers from Southern Shan State!